Gaadiid Usoo Dagay Madax Kililka ah & Baadhitaan Ku Socda - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Gaadiid Usoo Dagay Madax Kililka ah & Baadhitaan Ku Socda
Published on Sunday, 21 July 2013 12:52	Xogta Shacabka (Diridhabe) Gaadiid kuwa waaweyn ee xamuulka qaada ah oo la sheegay inay mulkigooda leeyihiin qaar kamid masuuliyiinta sare ee DDS oo dhawaan dalka soo galay ayaa lagu soo waramayaa in baadhitaan uu ku wado Komishinka Ka Hortaga Musuqa ee Dawlada Federaalka Ethiopia. Ilo lagu kalsoonyahay ayaa Xogta Shacabka soo gaadhsiiyay in gaadiidkan oo qaar dalka soo galeen qaarna ku soo beeganyihiin ay si canshuur dhaaf ah ku soo gashadeen laba masuul oo ka tirsan Dawlada Kililka 5aad.
Sida xogtani sheegayso Komishinka Ka Hortaga Musuqa ee Dawlada Federaalka oo dabagal ku hayay lacagaha dawlada ee madaxdu lunsanayaan ayaa baadhintaan ku haya afar gaadhi oo nooca loo yaqaano EURO TRACK iyo laba gaadhi oo xaajiyado (Double Cabin) oo todobaadkii hore ka soo dagay furdada Jabuuti hadana ku sugan magaalada Diridhabe.
Ilaha an xogtan ka helnay ayaa intaasi ku daray in masuuliyiinta iska leh mulkiga gaadiidkan ay isticmaalayeen magaca dad asxaabtood ah iyagoo sidoo kale canshuur-dhaaf ugu soo gashaday liisamo ay leeyihiin dad qurbajoog ah oo ay qaraabo yihiin.
Komishinka Ka Hortaga Musuqa ee dawlada dhexe ayaa dhawaan jeelka u taxaabay masuuliyiin sar sare oo ka tirsan dawlada Federaalka iyo qaar kamid ah Kililkada Oromada iyo Axmaarada, kuwaasi oo faraha kula jiray musuq maasuq baahsan.
Inkastoo aanaan wali helin magacyada masuuliyiinta DDS ee lagu tuhunsanyahy inay soo dajisteen gaadiidkan, waxaan dabagal ku haynaa isla mar ahaantaana ku rajo waynahay inaan helo cida ay yihiin iyo waliba halka uu marayo baadhitaanka Komishinka La Dagaallanka Musuqu.